SP-G08 180ml osisi ceramik ultrasonic ísì ụtọ diffuser maka aromatherapy, China SP-G08 180ml osisi seramiiki ultrasonic na-ahụ maka ndị na-emepụta aromatherapy, Ndị na-eweta, Flọ ọrụ - Sunpai Industries Limited.
100 A tụkwasịrị
49 * 33 * 37 cm / 12 Ibe
Nri 50000 kwa ọnwa
SP-G08 Osisi 180ram ceramic ultrasonic na-esi ísì ụtọ maka ọgwụ aromatherapy
Designme Ọmarịcha --- Osisi osisi na seramiiki ka ejiri ya rụọ nro na-eme ka ọkụ ọkụ ọkụ LED na-ekpo ọkụ; mmanụ mmanụ dị mkpa na - eme ụlọ gị na ọfịs gị mma. Soro na-eso rhythm nke ìhè na-amị amị, iji belata mmetụta nke esemokwu, mmetụta dị jụụ
Nchekwa --- ultrasonic aromatherapy diffuser ga-akpachi akpachi anya mgbe mmiri kpuchiri, enweghị nchekasị maka ịkpọ oku; BPA EWETA, enweghị nchekwa maka ụmụaka, yana ihe mgbochi corrosion, iji hụ na ejikwa gị
Ogo siri ike --- Onye mere ya nwere afọ iri na anọ nke ahụmịhe ọkachamara nke ndị na-enye mmanụ na ebe nchekwa; Ndi otu ndi n’iile ozi n’ebuola ihe kacha ju obi uto
Onye Okacha-eme nke Onye-otu - onye n’ogbe mmanu di nkpa. Na -emepụta ụzọ mgbapụ zuru oke site na ime ka ime mmụọ gị dị ọhụrụ, na-eme ka isi dị ọhụrụ; Ntughari uche na uchu na erute iru gi.
Ceramic + Osisi + PP
Gbanyụọ onwe gị mgbe mmiri adịghị
12 iberibe / katoonu
SP-WBL06-S iko ụlọ e ji achọ mma n’ụlọ aromatherapy ezinụlọ burner mmanụ